Indlela iingcamango zomvekisi zamehlo ezakha iMelika
Umqambi oyingqungquthela uThomas Edison wayengumzaliseli wezinto eziphambili, kuquka igramafoni, i-bulb yesibane yesimanje, igridi yamandla kunye nemifanekiso ehambayo. Nanku ukukhangela kwiimbalo zakhe ezimbalwa.
U-Edmond Edison wayeyinto yokuqala yokwenza i-toni ifowuni ifowuni. Ngethuba elisebenza ekuphuculeni ukusebenza komthumeli we- telegraph , waphawula ukuba i-tape yomatshini yanikezela ingxolo efana namazwi athetha xa edlalwa kwisantya esiphezulu.
Oku kuye kwabangela ukuba azibuze ukuba unokurekhoda umyalezo womnxeba.
Waqala ukuhlola isithintelo somnxeba ngomnxeba ngokufakela inaliti kuwo ngokusekelwe ekucingeni ukuba inaliti ingayibamba itekisi yephepha ukurekhoda umyalezo. Uvavanyo lwakhe lwamenza wazama ipolisi kwi-cylinder ye-tinfoil, eyamangalisa kakhulu, yayidlala umyalezo omfutshane abhalayo, "UMariya wayenemvana."
Igama igramafayile laliyigama loshishino lwe-device ye-Edison, eyadlala ii-cylinders kunokuba i-discs. Umatshini uneenaliti ezimbini: enye yokurekhoda kunye enye yokudlala. Xa uthetha emlonyeni, ukubetha kwezwi lakho kwakuya ku-cylindri ngenaliti yokurekhoda. I-cylinder igronograph, umshini wokuqala onokurekhoda nokuvelisa isandi, yenze ivakalelo kwaye yazisa udumo lwehlabathi lika-Edison.
Umhla owenzelwe u-Edison ukugqitywa komzekelo kwiprafografi yokuqala kwaku-Agasti 12, 1877.
Kodwa kunokwenzeka ukuba ukusebenza kumzekelo akuzange kugqityiwe kude kube ngoNovemba okanye ngoDisemba waloo nyaka ekubeni engayifaki ilungelo lobunikazi kuze kube nguDisemba 24, 1877. Wayeguqula eli lizwe nge-tin foilgraph kwaye wamenywa INdlu yeNdlu ukubonisa imbonakalo kuMongameli uRutherford B. Hayes ngo-Apreli 1878.
Ngomnyaka we-1878, uTomas Edison wamisa inkampani ye - Edison Speaking iPhonograph ukuthengisa umatshini omtsha. Wacetyisa ezinye izinto zokusebenzisa igramograph, njengobhala obhaliweyo kunye nokunyanzelisa, iincwadi zeefonographic kubantu abangaboniyo, irekhodi losapho (ukurekhoda amalungu omndeni ngamazwi abo), amabhokisi omculo kunye namathoyizi, iwashi ezivakalisa ixesha kunye nokuqhagamshelana nomnxeba ngoko unxibelelwano luya kubhalwa.
Igronograph yaqhubela phambili kwezinye izinto ezenziwayo. Ngokomzekelo, ngelixa i-Edison Inkampani izinikezele ngokupheleleyo kwi-cylinder igronograph, abahlobo baka-Edison baqala ukuvelisa i-dis player player kunye ne-disks ngasese ngenxa yokukhathazeka ngokuphakama kwama-disc. Kwaye ngo-1913, i- Kinetophone yaqaliswa, eyazama ukuvumelanisa imifanekiso yokuhamba kunye nesandi serekhodi yesigxina.
Iblabhu yokuKhanya eSebenzayo
Umngeni omkhulu kaThomas Edison kwakuyi-development incabescent, ukukhanya kagesi. Ngokuchasene nentsholongwane eninzi, akazange 'athile' isibane, kodwa kunoko waphucula kwimiqondo engama-50 ubudala. Ngomnyaka we-1879, usebenzisa umbane ophantsi okhoyo, i-filament encinciweyo kunye nefuthe eliphuculweyo ngaphakathi kwehlabathi, wakwazi ukuvelisa umthombo onokuthenjelwa, ohlala njalo.
Umbono wokukhanyisa ugesi wawungewona olutsha. Inani labantu babesebenze baze bafumana neendlela zokukhanyisa ugesi. Kodwa kwada kweso sihlandlo, akukho nto yayiphuhlisiwe eyayikusetyenziselwa ukusetyenziswa kwekhaya ngokude. Ukuphumelela kukaEdison kwakungabonakali nje ukukhanya kwamandla kagesi, kodwa kunye neendlela zokukhanyisa zombane eziqulethe zonke izinto ezifunekayo ukwenzela ukuba ukukhanya kwe-incandescent kusebenze, kukhuselekile kwaye kuqoqosho. Wayefezekisa oku xa wayekwazi ukuza nesibane se-incandescent kunye ne-filament ye-threads yokuthunga eyayitshisa ihora ezili-13 kunye neyure.
Kukho izinto ezimbalwa ezithandekayo malunga nokuveliswa kwebhubri yokukhanya. Nangona uninzi lwengqwalasela lunikezelwe ekufumaneni i-filament ebonakalayo eyenza ukuba isebenze, ukuveliswa kwezinto ezisixhenxe zezinto eziqhelekileyo kwakubaluleke kakhulu ekusebenziseni izibane zombane njengenye indlela yokukhanya kwegesi eye usuku.
Ezi zinto ziquka:
Inethiwekhi yomqhubi wehlabathi
Iifowuni zokugcina umbane rhoqo
Ukhuseleko ukhuseleko kunye nezinto zokuqhawula
Izibane zokukhanya kunye ne-switches on-off
Kwaye phambi kokuba u-Edison enze izigidi zakhe, nganye yalezi zixhobo kwakufuneka ihlolwe ngokuphonononga kunye nephutha kwaye iqhutywe phambili kwizinto ezibonakalayo, ezizaliswayo. Umboniso wokuqala woluhlu lwe-Light Edison we-incandescent yenkqubo ka-Thomas Edison yayise-laboratory ye-Menlo Park ngo-Disemba ka-1879.
Iinkqubo zoMbane eziShishino
NgoSeptemba 4, 1882, isitulo samandla esorhwebo sokuqala, esisePearl Street eManhattan esezantsi, saqala ukusebenza, sinika amandla ombane kunye nombane kummandla weekhilomitha enye. Oku kwaphawula ukuqala kwexesha lombane njengoko ishishini lamanje lombuso okhoyo usuqala ukususela kwi-gas yokuqala kunye ne-electric arc carbon-arc systems.
Isikhululo sombane esise-Thomas Edison sikaPearl Street senza izixhobo ezine eziphambili zenkqubo yesimandla sombane yanamhlanje. Kwakuquka isizukulwana esisekhompilweni esithembekileyo, ukusabalalisa ngokufanelekileyo, ukusetyenziswa kokuphela kokuphumelela (ngowe-1882, isibani sokukhanya) kunye nexabiso lokukhuphisana. Imodeli yokusebenza kakuhle ngexesha layo, i-Pearl Street isebenzisa enye yesithathu i-fuel fuel of its predecessors, ishisa malunga neekhilogram ezili-10 zamalahle nganye nge-kilowatt iyure, "izinga lokushisa" elilingana ne-138,000 Btu nge-kilowatt iyure.
Ekuqaleni, isevisi yePearl Street yayikhonze amakhasimende angama-59 malunga nama-24 engama-kilowatt ngeyure.
Ngasekupheleni kwee-1880, ukufunwa kwamandla ngamagesi kagesi ngokuphawulekayo kwatshintsha i-shishini. Kwakuhamba ngokubanzi ukubonelela ukukhanya kwebusuku ukuba ibe yisevisi yamahora angama-24 ngenxa yokufuna umbane ophezulu wokuthutha kunye neemfuno zoshishino. Ekupheleni kwee-1880, izitishi ezincinci eziphambili zinezixeko ezininzi zase-US, nangona ngalinye lilinganiselwe ngobukhulu kwiibhloko ezimbalwa ngenxa yokudluliselwa kwezinto ezikhoyo ngoku.
Ekugqibeleni, ukuphumelela kombane wakhe kwanikela uTommas Edison kwiindawo eziphakamileyo zobugcisa kunye nobutyebi njengombane ojikelezayo kwihlabathi. Iinkampani zakhe ezahlukeneyo zombane zaqhubeka zikhula zize zihlanganiswe ukuze zenze uEdison General Electric ngo-1889.
Nangona ukusebenzisa igama lakhe kwinqanaba lenkampani, u-Edison akazange alawulwe le nkampani. Imali enkulu efunekayo ekuphuhliseni imboni yokukhanyisa i-incandescent iya kubangela ukuba kubandakanyeke kubanini-mali bentengiso njengoJP Morgan. Kwaye xa uEdison General Electric ehlangene nomqhubi okhokelayo uThomas-Houston ngowe-1892, u-Edison wahlaselwa egameni kwaye inkampani yaba, ngokuqhelekileyo, i-General Electric.
Inomdla kaThomas Edison kwimifanekiso yokuhamba phambili yaqala ngaphambi kowe-1888, kodwa yayingumfuphi weeNgesi u- Eadweard Muybridge ukutyelela kwibhubhoratri yakhe eWest Orange ngoFebruwari waloo nyaka wamkhuthaza ukuba avelise ikhamera kwimifanekiso ehambayo.
UMybbridge ucebise ukuba basebenzisane kwaye badibanise iZoopraxiscope kunye ne-Edison phonograph. U-Edison wayenomdla kodwa wagqiba ekubeni angathathi inxaxheba kubambiswano olunjalo kuba wayeziva ukuba i-Zoopraxiscope ayilona ndlela efanelekileyo okanye efanelekileyo yokurekhoda.
Nangona kunjalo, wayeyithanda le ngcamango kwaye wafaka i-caveat kunye ne-Ofisi yamaPententi ngo-Oktobha 17, 1888, leyo ichaza iingcamango zakhe zeso sixhobo "esiza kwenza iso ukuba iphimografone yenzeni indlebe" - irekhodi kwaye ivelise izinto ezihambayo. Isixhobo, esibizwa ngokuthi " iKinetoscope ," sasinxulumene namaGrike athi "kineto" esithetha "ukunyakaza" kunye ne "scopos" elithetha "ukubukela."
Iqela likaEdison lagqiba uphuhliso kwiKinetoscope ngowe-1891. Omnye wemifanekiso yokuhambisa yokuqala ye-Edison (kunye nomfanekiso wokuqala wokuthutha owake waba ne-copyright) wabonisa ukuba umqeshwa wakhe uFred Ott uzenza ngathi udibanise. Ingxaki enkulu ngeli xesha, nangona kunjalo, loo nto yefilimu enhle yemifanekiso yokuhamba yayingekho.
Yonke into yatshintsha ngo-1893 xa u-Eastman Kodak eqala ukunikezela ngesitampu sefestile yefestile, okwenza ukuba u-Edison akwazi ukunyusa ukuveliswa kwemifanekiso eshukumisayo. Ukwenza oku, wakha isilayidi yokuvelisa isithombe esiseNew Jersey esinephahla evulekileyo ukuze ivule imini. Isakhiwo sonke sakhiwa ukuze sitshintshwe ukuba sihlale sihambelana nelanga.
C. UFrancis Jenkins noTomas Armat baqulunqa iprojekti yefilimu ebizwa ngokuba yi-Vitascope bacela u-Edison ukuba anike iifilimu aze enze iprojekthi phantsi kwegama lakhe. Ekugqibeleni, i-Edison Inkampani yavelisa iphrojekthi yayo, eyaziwa njengeProjectoscope, kwaye yayeka ukuthengisa iVascope. Imifanekiso yokuthutha yokuqala eboniswe kwi "movie showater" yaseMelika yaboniswa kubaphulaphuli ngo-Aprili 23, 1896, kwisixeko saseNew York.
I-Milky Way ne-Andromeda Galaxies kwi-Cours Course